Ciyaaro bilaash ah - Ciyaaraha Sim
Ciyaaraha bilaashka ah
Keydso qaar ka mid ah ciyaaraha lacagta caddaanka ah.
Ku rid koofiyada ganacsigaaga. Hiddaha Tycoon ayaa kugu hagaya maareynta ganacsiga guusha. Waxaan leenahay ciyaaro lacag la'aan ah oo aad ka heli karto internetka.
Muuqaal sawireed © qaado 2.
"Railroad Tycoon" waa ciyaar ka mid ah hababka tareenada iyo isku xirka si ay u ordo sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah iyada oo samaynta awooddaada lacagta taajir ah. Qeybo badan oo ka mid ah ciyaartoyda waxay dareensanyihiin in mid ka mid ah ciyaaraha kale ee taxanaha ah ay u fiicnaadeen sida asalka ah.
02 ka mid ah 07
Kulankan, shaqadaada ayaa ah in la helo kalluunka suugada ah adoo kalluumeysi ah. Waxaad naftaada eegaysaa inaad eegto haddii cunuggaaga kalluunka uu koray iyo waxa uu abuuray jilibyada cusub ee aad abuurtay. Lacag ayaa lagu kasbaday adoo dejinaya qiimo iyo iibin kalluun. Waxaad u baahan doontaa lacagta caddaanka ah si aad ugu iibsato ukunta kalluunka iyo hagaajinta taangiyada. Haddii aan lahaan laheyn hal kalluun oo kaliya, tani waxay noqoneysaa tan. More »
"Khamiis Kusoo Taaban"
Iibso sahayda oo iibinta qaxwaha ilaa macaamiisha la mamnuucay. Waa kulan fudud oo la qaado oo la ciyaaro. Waa ciyaar fiican oo aad ku haysato inta lagu jiro waqtiyada marka aad wax yar u ciyaareyso waqti yar.
"Baseball Mogul 2006"
Waxaa laga yaabaa inaysan heysanin tikidhka adduunka ee horyaalka. Wali waxay leedahay fikrad la mid ah. Isboortiga Mogul ayaa sii daayay version "Baseball Mogul" oo ah hordhac taxane ah. Waxaad ku jirtaa gabi ahaanba koox ka mid ah kooxda kubbadda kolayga. Qiimaha tikidhada, tafaftirka, xeeladaha, xeeladaha daafaca, iyo ciyaartoyda yaryar ee horyaalka.
05 ka mid ah 07
"Grand Prix Tycoon"
"Grand Prix Tycoon" ma aha ciyaar khatar ah. Ciyaarta internetka ayaad adigu dooraneysaa hagaajinta, darawalka, iyo kalkaaliyeyaasha. Jinsiyada iyo godadka godadka ayaa lagu dhammeeyaa si dhakhso ah u riixa badhanka qoraalka. More »
06 ka mid ah 07
Madaxa tartanka tartanka adigoo dooranaya tababare iyo faras. Soo iibso gaadiidka, faraska feedhka, iyo faragalinta faraskaaga. Baaskiilada waxaa loo samayn karaa faras ama faras kale. Lacag badan ayaa la sameyn karaa sidan. Waa madadaalo, dhakhso u bartaa, oo aad ku badbaadin karto ciyaarahaaga. More »
07 ka mid ah 07
"McDonald's Video Game"
Ma jeclaan lahayd inay noqoto milkiilaha McDonald's? Waxaa laga yaabaa, maya. "Game Video" ee "McDonald's Video" maaha mid si fudud loo dhigo silsiladda cuntada. Si aad u sameyso xayawaanka faa'iido leh ma heli doonaan daaweynta ugu fiican, cunnadu ma noqon doonto tayada ugu fiican. Tani waa hal kulan fiidiyoow ah oo aan ansaxin shirkadda "McDonald's". More »
Qeybta Xawaarida ah ee IV: Talooyin iyo Talooyin Masruuf ah - Deji 2
Waa maxay Diidmada?
Dunida Aragtida ee Dunida Adduunka
Cayaaraha StarCraft ee Cayaarta Istaraatiijiyada Istaraatiijiga ah
GeneRally - Raadinta Car Racing PC Game
Cube - Cayaar PC oo bilaash ah
Kacsan & Fall: Marinooyinka Dagaal-Dagaalka PC-ga Bilaashka ah
Lambarrada Cheats Cheats, FAQs, iyo Tilmaamaha PC
Delta Force: Black Hawk Down Down oo khatar u ah PC
Yaa Isticmaalaya Webka Dark, iyo Maxay tahay?
Talooyin loogu talagalay sameynta filimada guriga oo eega Weyn
Dib-u-hadal Khadka Roulette: Meesha Laga Dhoofiyo Goobta Faa'iidada
Sida Loo Sheego Haddii Qofka Kuu Beddelay iPhone
Xalliyo Masawirka Tijaabada iyo Sawirada
Dell Inspiron 660s PC Desktop
Eeg Fariimaha Dheeraadka Fariinta ee Emailka iCloud.com
Rampant Live! Wuxuu doonayaa inuu ogaado dhammaan adiga kugu saabsan
Ku daabac Tusmooyinka Boodhadhka iyo cinwaanada ee Excel
Waa maxay TDMA? Qeexitaanka TDMA
Noocyada qaababka iyo qaababka bilaashka ah ee Photoshop ee Shelby Kate Schmitz
Nidorina: Pokemon # 30 ee Pokemon Pokedex ee Qaranka
VIZIO VHT215 Masraxa Guriga Sound Bar iyo Subwoofer
Sida Loo Isticmaalo VLC Si Loo Weydiiyo Ilaa Wixii Fiidiyow ah ee TV-ga Apple
Maxay Faylka SWF?
Helitaanka Your TiVo MAK (Key Access Access)
MiniDV iyo Digital8 Facts and Tips
Ciyaaraha ugu Fiican ee Ciyaaraha iPad
Excel MEDIAN IF Formula
Sababaha Xidhiidhada Wi-Fi Xiriirinta